Pipette Matipi, PCR Zvinoshandiswa, Reagent Mabhodhoro - ACE
Tora mahara emaharaEndai
Hou Suzhou ACE Biomedical Technology Co, Ltd. ikambani yehunyanzvi yakazvipira kupa mhando yepamusoro yezvinoraswa uye marabhoritari epurasitiki anoshandiswa muzvipatara, makiriniki, ekuongorora malabhoritari uye ehupenyu sainzi yekutsvaira marabhu.
♦ Isu tine ruzivo rwakakura mukutsvagisa nekusimudzira kwehupenyu sainzi mapurasitiki uye tinogadzira yakanyanya kugadzikana yezvakatipoteredza uye mushandisi inoshamwaridzika yezvinhu zvinoshandiswa. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa mukirasi medu makamuri zviuru zana zvakachena. Kuona mhando yemhando yepamusoro inosangana kana inodarika zviyero zveindasitiri, isu tinoshandisa chete yemhando yepamusoro mhandara mbishi kugadzira zvigadzirwa zvedu…
Nyanzvi mune yakakwira-quanlity yezvokurapa uye biolab zvikamu
Hamilton STAR CO-RE zano
96 Zvakanaka PCR Plate
Tecan LiHa RSP Zano
Tecan MCA Matipi
350ul 96 Round zvakanaka ndiro V pasi
350ul 96 Yakatenderera tsime ndiro U pasi
96 Zano Combs
Kubva payakatanga, ACE yakazvipira kugadzira nekupa ekurapa epamusoro uye marabhoritari ekushandisa kune vatengi vedu.
1. Kupa yemhando yekugadzira tekinoroji
2. Govera kukwikwidza chitaurwa
3. Ipa rakanakisa mushure-rekutengesa sevhisi
Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa nevanoziva mainjiniya.
Vatengi vedu munyika dzinopfuura makumi maviri.
OEM KUSHANDIRA NEMAHARA
MOLD / CHITUKU
Yakadzika tsime mahwendefa
ACE Biomedical inopa yakakura yakawandisa masitera akadzika tsime microplate kune anonzwisisika ehupenyu uye emishonga ekutsvaga ekushandisa. Yakadzika tsime microplates kirasi yakakosha yeanoshanda epurasitiki anoshandiswa pakuenzanisira kugadzirira, mukomboni kuchengetedza, kusanganisa, kutakura uye kuunganidza zvikamu. Ivo ...
Ita Firita Pipet ...
Mune rabhoritari, sarudzo dzakaomarara dzinoitwa nguva nenguva kuti dzione kuti ndedzipi dzakanakisa dzekuitisa kuyedza kwakakosha uye kuyedza. Nekufamba kwenguva, matipi epipette akachinjika kuti aenderane nemarabhasi pasirese uye nekupa maturusi kuti mahunyanzvi uye vesaenzi vakwanise kuita tsvakiridzo yakakosha. Izvi zvakanyanya ...
Ari Nzeve Thermomet ...
Idzo infrared nzeve thermometer idzo dzakakurumbira kwazvo kuvana vevana nevabereki dzinokurumidza uye nyore kushandisa, asi ndedzechokwadi here? Kuongororwa kwekutsvagurudza kunoratidza kuti vanogona kunge vasiri, uye nepo tembiricha misiyano iri mishoma, vanogona kuita mutsauko pakurapwa kunoitwa mwana. Resea ...